Accueil > Gazetin'ny nosy > Vadin’i Rina Andriamandavy: Mirehareha tsy azo kasihina ihany koa ny vadiny
Vadin’i Rina Andriamandavy: Mirehareha tsy azo kasihina ihany koa ny vadiny
Isan’ny voaresaka ny Loholon’i Madagasikara voafidy avy any Mahajanga teo anivon’ny lapan’ny Antenimierandoholona tamin’iny herinandro lasa teo iny, raha nifanatrika tamin’ireo loholon’i Madagasikara ny mpikambana ao amin’ny governemanta, ny mizana tsindriana ila ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny raha-
raha Lylison sy ny raharaha Rina Andriamandavy. Samy loholon’i Madagasikara rahateo ireo, ary samy fantatra ny olom-pirenena maro ny nataony avy ka miteraka ady hevitra isan-karazany.
Ny loholona Lylison, hoy ny fampahatsiahivan’io loholona voafidy tany Sofia Mahajanga io, dia niantso ny olom-pirenena mba hisaintsaina any an-tranony avy momba ny fahasahiranana mianjady amin’ny isan-tokonambaravarana. Izany hoe mba tsy mivoaka ny trano izany. Tsy nanakorontana na nandika lalàna izy, nefa dia didy fampisamborana azy no navoakan’ny tompon’andraikitra, hoy io loholona io.
I Rina Andriamandavy kosa, hoy ihany ny fanampim-panazavany, nitarika olona nankeny amin’ny foiben’ny Bianco eny Ambohibao ary nitoratora-bato an’io tranon’ny Bianco io sy
nihorakoraka, nanakorontan-tsain’ireo mpiasa tao, ankoatry ny fandrahonana nataony tamin’ny mpitsara izay nirahin’ny tonian’ny fampanoavana eto Antananarivo hijery raha tao amin’ny Hôpitaly Ravoahangy Andrianavalona etsy Ampefiloha tokoa i Claudine Razaimamonjy, nefa dia mangatsiatsiaka sy tsy manana ahiahy ary mirehareha sy mizahozaho ary mihevi-tena ho tsy maty manota aza…
Tena mizana tsindriana ila izany amin’ny tontolon-draharaham-piaraha-monina izay ambara fa mampihatra ny tany tan-dalàna.
Ka omaly àry ; tetsy Ampefiloha, tsy lavitra ny tranom-barotra « Elite Gsm », dia nasain’ny mpitandro ny filaminana nijanona ny fiara mainty iray tsy mataho-dalana (4×4), toa «V8» angaha izy iny, hoy ny nahita maso. Ny fiara toa ireny aloha matoa sakanan’ny mpitandro ny filaminana dia efa fantany manokana ny ankamaroany fa tsy hoe voasakana tsy nahy.
Nojerena ny taratasin’ny fiara, ary nivoaka ny vehivavy iray izay nitonona fa « vadin’ny loholona Riana Andriamandavy ». Nivoaka avy tao koa ny lehilahy vaventy miisa efatra. Efa nivonombonona ny «hanohitra ????» an’ireto mpitandro ny filaminana. Ny mpitandro ny filaminana moa dia ny avy ao amin’ny boriboritany fahefatra etsy Isotry sy ny avy amin’ny Vondrona « Uir ».
Dia nasain’ireo mpitandro ny filaminana nanaraka azy izy ireo. Taorian’ny famotorana tany dia navotsotra.
Inona no dikan’izany ? Tsy azo hadinoina fa rahavavin’i Claudine Razaimamonjy ity vadin’i Rina Andriamandavy ity, ary na io omaly io aza dia mbola nirehareha ho tsy azo kasihina na kitihina izy.
Efa narahin’ny mpitandro ny filaminana maso ve izy ireo sa i Rina Andriamandavy no nokasaina hosamborina fa ny vadiny no tao anaty fiara ?
Ny fanampim-baovao re koa mantsy dia toa fantatra ny manam-pahefana any ambony any, indrindra fa ny eo anivon’ny fitandroana ny filaminana ny mahavoatonona an’i Rina Andriamandavy amin’ny raharaha bokin’omby. Horesahintsika amin’ny manaraka ny momba an’io fa mbola hatevenina aloha ny porofo rehetra.
Jean Ravelonarivo: Hilatsaka ho filoham-pirenena
Tsy fandriampahalemana: Tsy mahagaga raha mbola mihanaka manenika ny Nosy
Inty sy Nday: Lany olo-manga ve Madagasikara ?
Bolokim-bazaha: Miasa mafy amin’izao fifidianana izao
Antananarivo: Tsy misy jiro intsony ny “ Poteaux”
Fanitsiana ny teti-bola: Tsy ivakian’ny depiote loha
Hetsika ho amin’ny fanovana: Ny Sendikan’ny mpiasa no nitarika omaly
Minisitr’i Ntsay: Hamita-bahoaka amin’ny fizarana vary sy bodofotsy
Inty sy Nday: Mpitondra mpandrahona !